AKỤKỌ AKWỤKWỌ: Martin Vrijland
Friesland, asụsụ nke ya na omenala ya bụ àgwàetiti n'okpuru Iceland a na-akpọ Frisland?
gbara akwụkwọ Akwukwo Igbo	by Martin Vrijland	na 7 January 2017	• 7 Comments
O yiri ka akụkọ ọhụụ oge ochie nwere ike ịgha ụgha dị ka a gosipụtara na nchọpụta nke agwaetiti Frisland na map ndị ochie nke yiri ka ọ dị na ụlọ akwụkwọ ọwa ụwa. Ị chetụla mgbe ọ ga - ekwe omume na e nwere ndị dị otú a bụ ndị isi ike dị n'ebe ugwu nke Netherlands na - asụ asụsụ [...]
gbara akwụkwọ Akwukwo Igbo	by Martin Vrijland	na 18 Ka 2016	• 33 Comments
N'okwu ikpeazụ m, ekwuru m ya ugboro ugboro, ya bụ na ụwa ka na-agba ọsọ ndụ n'oge ochie. Ikekwe, ị ga-eche "Ah, olee otu ị si eme ka nwoke ị na-arụsi ọrụ ike!", Ma ọ bụ ihe dị mma ị na-amụ, n'ihi na mgbe ahụ ị ga-aghọta otú akụkọ ihe mere eme, ugbu a na ọdịnihu [...]
Brexit adịghị njọ maka obi ego ego nke Britain
gbara akwụkwọ Akwukwo Igbo	by Martin Vrijland	na 14 Ka 2016	• 3 Comments
Ụnyaahụ, anyị hụrụ akụkọ NOS na Brexit (nke bụ British si na Europe pụọ) nwere ike inwe nnukwu ego maka obi ego London. Otú ọ dị, nke a bụ ihe efu ma ọ bụrụ na anyị dị egwu ịkụ ala iji nyochaa ihe kpọmkwem ego ego London. Nke a [...]
Agha na Syria na agha nke ụwa na-abịa ma ọ bụ 'budding'
gbara akwụkwọ Akwukwo Igbo	by Martin Vrijland	na 10 Ka 2016
President Russia bụ Vladimir Putin kpọrọ ụnyaahụ maka nhazi nke nzukọ nchebe zuru ụwa ọnụ iji lụsoo iyi ọha egwu ọgụ. Ajụjụ a bụ ma anyị nwere ike ikwu na nke a bụ na Putin (ma ọ bụ Putin, ọ bụrụ na-amasị gị) na-akwado akwado ụwa nile nke New World Order. Iji zaa ajụjụ ahụ ọ nwere ike ịbụ [...]
Na-eme Ememe Ncheta? Ị ma ihe ị na-eme?
gbara akwụkwọ Akwukwo Igbo	by Martin Vrijland	na 5 Ka 2016	• 0 Comments
Ọ bụrụ na ị ga-eme ememe ncheta ụbọchị taa ma chee na ị na-eme ememe nke Netherlands site na ndị Nazi, wepụta oge iji chọpụta ma ọ bụ eziokwu. Na weebụsaịtị Truthseeker1313.com enwere ike ịhụ echiche dị iche iche banyere akụkọ ihe mere eme karịa na [...]
Martin Vrijland gbara ajụjụ ọnụ banyere Sean Hross gbasara otú ndị isi na-achị ụwa
gbara akwụkwọ Akwukwo Igbo	by Martin Vrijland	na 31 March 2016	• 18 Comments
N'ajụjụ ọnụ Martin Vrijland na Sean Hross na 31 March 2016, a na-atụle okwu ndị dị mkpa. Sean Hross bụ onye ọkọ akụkọ ihe mere eme na nke South Africa. Tupu mgbe ahụ, ajụrụ m ya 25 May 2015. Ozi Sean dị mkpa iji ghọta ihe niile anyị na-eme taa [...]
Ihe mere Europe ji eme ka Erdogan bụrụ ihe na-adịghị mfe, ma na nzuzo ka ya na Hitler ọhụrụ ahụ kwadoro
gbara akwụkwọ Akwukwo Igbo	by Martin Vrijland	na 11 March 2016	• 4 Comments
Tupu Agha Ụwa nke Abụọ, anyị hụrụ nnukwu mmụba na akụnụba Germany. Adolf Hitler wuru ụlọ ọrụ zuru oke ma rụọ ọrụ dị ukwuu. Nke a kpatara ọgba aghara nnukwu akụ na ụba na Germany, bụ nke ruo mgbe ahụ tara ahụhụ nke ukwuu site na ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ mgbe Agha Ụwa Mbụ gasịrị. Ndaghachi azụ akụ na ụba nwere ike ime Adolf Hitler ọzọ [...]
Ndi Jesus ekedi ubon udia; Ndi ulo eze bu umu Fero?
gbara akwụkwọ Akwukwo Igbo	by Martin Vrijland	na 11 March 2016	• 6 Comments
Ọ bụ akụkọ ihe mere eme dị ka anyị si mara ya? Okpukpe dị ka anyị maara ha ziri ezi na-anọchite anya ha sitere? Gịnị mere Queen Elizabeth II nke Great Britain ji kpuchie n'ocheeze nke dị n'elu nkume Jekọb na n'elu steepụ dị ka pyramid? Tupu m mechie nyocha [...]
gbara akwụkwọ Akwukwo Igbo	by Martin Vrijland	na 10 March 2016	• 6 Comments
"Order Merit of the Federal Republic of Germany" (German: Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland) bụ naanị usoro iwu nke Germany ma guzobere ya na onye ọchịchị Federal Theodor Heuss na 7 September 1951. E nwere ihe dị egwu banyere obe a. A na-enye ya ndị a ma ama ndị Dutch. Nanị ndepụta: Queen Juliana na Prince Bernhard, Queen Beatrix na [...]
Ọnọdụ agha na Syria; Alaeze Ukwu Rom nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, Byzantium na Alaeze Ottoman
gbara akwụkwọ Akwukwo Igbo	by Martin Vrijland	na 7 March 2016	• 0 Comments
Iji ghọta nduzi nke Turkey n'okpuru nduzi nke President Tayyip Recep Erdogan, ọ dị mkpa ileba anya na otu akụkọ ihe mere eme. Ọ bụrụ na anyị mata akụkọ ihe mere eme, anyị ga-aghọtakwara otú e nwere ike isi kọwaa agha ahụ dị ugbu a na Syria; nke dị iche iche nọ n'ọrụ na 'onye' ma ọ bụ 'ihe' n'ezie [...]
Nleta ha: 4.255.507